बैशाख ३ पछि लकडाउन बढ्छ कि हट्छ ? गरिब जनता रोगले भन्दा भोकले मर्दै, सरकारले यस्तो निर्णय गर्दैछ (भिडियो हेर्नुस) – दैनिक नेपाल न्युज
कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणका कारण अहिले देश ‘लकडाउन’को अवस्थामा छ । चैत ११ गते बिहान ६ बजेदेखि सुरु भएको उक्त ‘लकडाउन’ सुरुमा ७ दिनका लागि घोषणा गरिएको थियो । अहिले त्यसलाई २ पटक बढाएर बैशाख ३ गतेसम्म पुर्याइिएको छ । पछिल्लो सरकारी निर्णयअनुसार सो दिन मध्यान्ह १२ बजेसम्म ‘लकडाउन’ कायम रहनेछ । पछिल्लोपटक घोषणा गरिएको अवधिका कारण देश २३ दिन बन्द भएको छ ।
बैशाख ३ गतेसम्म ‘लकडाउन’ हुने भएपछि यो नयाँ वर्ष सबै नेपालीहरुको घरभित्रै बित्ने निश्चित भएको छ । तर ३ गतेदेखि देशमा के हुन्छ भन्नेबारे अहिलेसम्म केही उल्लेख गरिएको छैन । त्यसो त, गत बिहीबार मात्रै ‘काठमाडौंबाट बाहिर जान दिने गरी २ दिनका लागि शुक्रबार र शनिवार ‘लकडाउन’ खुला गर्ने’ भनी सरकारले गरेको भनिएको निर्णयबाट अहिले सरकार पछि हटेको छ । बैशाख ३ पछि लकडाउन बढ्छ कि हट्छ ? गरिब जनता रोगले भन्दा भोकले मर्ने डर, सरकार यसरी सोच्दैछ (भिडियो हेर्नुस)